LANDELA Mt Adams kanye neMt St. Helens FSX & P3D - Rikoooo
Usayizi 4.70 GB
Play 8 893
Umbhali: Blue Sky kwendawo
Wide photo-real HD ezinobuhle (1m / kwe-pixel) ingxenye enkulu isimo Washington (US) kanye ucezu Oregon, indawo kuhlanganisa sezindiza ezilandelayo KTDO, KCLS, KKLS kanye KAST. Ungakwazi ukundiza phezu kweNtaba Adams neNtaba St. Helens (stratovolcano esebenzayo), ezinye izingxenye Hood River, Astoria (KAST), Longview (KKLS), Vancouver (WA) ...
sezindiza ngasinye ibekwe sisendaweni ekahle futhi wanezela eminye izakhiwo. Ukwengeza watermask, Lezingu lichazwe kabusha + 10m isixazululo anezikhala.
Lokhu ukulanda 4 esindayo kakhulu.70 GB uma ungeyena Jumbo Ilungu alindele ukuba balinde amahora ezinye thwebula. Lokhu nobuhle bendawo lahlukaniswa laba 6 izingxenye, emva thwebula unzip everything kufolda bese uchofoze on mt_adams_and_mt_st__helens.exe ukuqala ukufakelwa.
I-Barre des Ecrins - I-Photoreal plus mesh FSX & P3D
I-Phot Eveal Mt Everest plus Mesh FSX & P3D